ULoki Isiqendu 3 Ukophuka: amaqanda epasika, ithiyori kunye nento onokuyilindela - Inkcubeko
ULoki Isiqendu 3 Ukophuka: amaqanda epasika, ithiyori kunye nento onokuyilindela
ULoki Isiqendu 3 wanika ezimbini kuthotho 'ezona zityhilelo zikhulu ziya kubaluleka ekumiseni ikamva lesiGaba se-MCU. Ngaphambili, uMarvel wayekuqinisekisile ukutyhilwa kukaLoki' ngokwesini 'okanye ubungqingili obunokwenzeka Kwitrayer ekwi-Twitter. Nangona kunjalo, zombini ezi zinto zahlukileyo zikaLoki zidibanisa ngaphezulu kwazo Ukukhetha ngokwesondo ngendlela yendalo yayiyenye yezona zinto zazibalasele ngesiqendu.
Oku kutyhilwe kwamkelwa kakuhle ngabalandeli, ngakumbi abo bakwi-LGBTQ + yoluntu. Abanye bade bathi sesona sipho sihle senyanga yebhongo. Ngaphaya koko, Isiqendu 3 sikwaqulathe ukutyhila ukuba iingcebiso kwiTVA okanye abasemagunyeni emva kweTVA ngabachasi bokwenene kolu ngcelele.
Ngaphaya koko, isiqendu sasinokulandelelana kwamanyathelo amafutshane, kusenza ukuba songezwe ngokwamkelekileyo kubanter onobuqili phakathi kwezi zinto zahlukileyo. I-Loki Isiqendu 3 saphinde sancwina kancinci kwi-backstory yokwahluka kwabasetyhini, uSylvie. ULoki noSylvie babelane ngomzuzu omnandi wokukhumbula iinkumbulo zoomama babo, ezazibonakala ngathi zinguFrigga kwimeko kaSylvie ngokunjalo.
Ngubani umfana we-phil lesters
ULoki Isiqendu 3 sasinesihloko esithi 'Lamentis', esasibonisa okwahlukileyo kukaLoki: uLoki noSylvie babambeke kwinyanga ekuhlalwa kuyo, iLamentis 1, ngo-2077.
Lixesha lotshintsho kubuhle ✨ Isiqendu sesithathu seMarvel Studios ' #Loki ngoku iyasasaza @NtsikeleloTyala . pic.twitter.com/NA1zEKkF3D
-Loki (@LokiOfficial) NgoJuni 23, 2021
Isiqendu 3 sikaLoki sasigcwele izingqinisiso kunye namaqanda ePasika adityaniswa nezi zimbini zibalulekileyo zityhila.
Nalu uluhlu lwamaqanda epasika kunye nethiyori ezivela kwisiqendu 3, 'Lamentis.'
UChris Evans (uKapteni waseMelika / uSteve Rogers) kwi-Snowpiercer (2013). Umfanekiso nge: CJ Ukuzonwabisa
Esi salathiso asilahlekanga kuninzi lwabalandeli. Kwinqaku lesi-3, uLoki kunye noSylvie kufuneka babaleke kwinyanga enokutshabalaliswa, 'iLamentis (ngo-2077),' eya kuthi idibane neplanethi yayo kungekudala. Abemi baseLamentis kuya kufuneka baxhomekeke kwisithuthi esiphuma, 'umkhombe.' Oku kuya kufuna ukuba baye 'emkhombeni' besebenzisa umzila kaloliwe, onika ithuba lokufumana amatikiti kwizikhulu zaseLamentis.
Esi sisalathiso ngqo kwi-'Snowpiercer (2013) 'yefilimu eneenkwenkwezi' zeCaptain America 'uChris Evans. Emva kwexesha 'i-Snowpiercer' nayo yenziwa kuthotho.
Isini sikaLoki kunye noSylvie:
loki episode 3 abamoshile #loki #LokiWednesdays
I-LOKI & SYLVIE ZI-Canon BISEXUAL KWI-MCU OH UTHIXO WAM
KUFUNEKA WENZE INKOSI… OKANYE KWENZEKA UKUBA KWENYE INKOSANA. '
Kancinci kokubini. NDIKHUMBUKA NGOKWAKHO. pic.twitter.com/zAvCWmUklP
- (@photonsblast) - NgoJuni 23, 2021
U-Loki ngokwembali ebekade 'elulwelo-ngokwesini,' kwaneentsomi zaseNorse. Kwiintsomi ze-Nordic, uLoki waziwa ngokutshintsha phakathi kwabantu besini ukuze ahambelane neenjongo zakhe ezimbi.
Kwiimidlalo ezihlekisayo, 'uLady Loki' wayenguLoki nje owayehlala emzimbeni kaLady Sif. Ngapha koko, komnye umba wokuhlekisa 'uLoki: Ummeli we-Asgard,' inguqulelo kaLoki yasekwa ukuba ibe 'lulwelo lwesini' ngokutshintsha okucacileyo phakathi kwendoda nebhinqa.
USylvie - I-Enchantress:
USylvie Laufeydottir kwi-MCU, uSylvie Hushton kwiiKomikhi, u-Ikol Loki kwiikhomikhi. Umfanekiso nge: Disney + / Marvel
USylvie Lushton, uLady Loki, u-Ikol Loki (ovela ku'Loki: Ummeli weengqungquthela ze-Asgard), kunye ne-Enchantress (Amora) ngabalinganiswa abohlukileyo abanemvelaphi eyahlukeneyo kwiincwadi zeekomiki. Nangona kunjalo, sichaze ukuba uLoki obhinqileyo owahlukileyo kuthotho oluthi 'uSylvie Laufeydottir,' yayikukudityaniswa kwabalinganiswa abanjengoLady Loki, uSylvie Hushton, kunye noIkol Loki ohlekisayo.
Ngoku, Isiqendu 3 sikwaqinisekisa ukuba USylvie ukusuka kuthotho lweLoki ikwasekwe kwi 'Enchantress.' Oku kungqinwe ngu UGrace Randolph (Ngaphandle kwetrailer) , owafumana isiqinisekiso kumthombo wakhe.
Omnye! ' Isalathiso (ukusuka kwiTro) kwiLoki Isiqendu 3. Umfanekiso nge: Disney + / Marvel
Oku bekucacile ngokucacileyo kuThor, umntakwabo. Kwifilimu yokuqala ethi 'Thor', eyazisa oothixo baseAsgardian, uThor ubonwa e-odola enye ikomityi yekofu eMhlabeni (Midgard) ngokubetha indebe esele ikho. Bobabini uThor noLoki bathi, 'Omnye!' Ngelixa u-odola ukuzaliswa kwesiselo kwifilimu nakuthotho, ngokulandelelana.
Abasebenzi beTVA ziintlobo ezahlukeneyo-iMobius evela kwi-90s:
ULoki kunye noMmeli weMobius kwisiqendu 2. Umfanekiso nge: Disney + / Marvel
Ukutyhilwa kwesibini okukhulu kweLoki Isiqendu 3 kuxa uSylvie wakhankanya ukuba bonke abasebenzi be I-TVA (Igunya lokwahluka kwexesha) ezahlukileyo ngokunjalo. Isityhilelo esidityaniswe nenkcazo kaMobius yesizathu sokuba abe 'nemagazini yejet ski,' kunye noluhlu lubonisa kakhulu ii-1990's ' Ngantoni Isoda, ekwabonwa ngathi ityiwe Ummeli Mobius , inokuthi iguqulele kwimvelaphi kaMobius kolu thotho lukwii-1990s.
Ukutshintsha kwesini kukaSylvie- 'Ummeli weAsgard' Comics:
ULoki kwi-Agent ye-Asgard 'yemicimbi ehlekisayo. Umfanekiso nge: Marvel Comics
Kwi-'Loki: Ummeli we-Asgard 'Comic Issue # 5, uguqulelo lukaLoki lubonakala luguquka ukusuka kwindoda ukuya kubasetyhini uLoki. Emva kokuba echaze uLorelei:
'(Loki) ndingaguquka ibe yiyo nantoni na, ukuba ikwangam.'
Ngoku, kuthotho, uSylvie uthi:
(IiLoki's) andinguye ngoku. NdinguSylvie ngoku. '
USylvie noLoki kwiLamentis 1 kwisiqendu 3. Umfanekiso nge: Disney + / Marvel
Oku kucebisa kwithiyori yenguqu ebonakalayo yesini sikaSylvie. Usenokuba wayeyindoda eyahlukileyo kaLoki otshintshe okanye otshintshe waba libhinqa.
UDavid (Iposi- uMhlaba 666). Umfanekiso nge: Marvel Comics
KwiLoki Isiqendu 3, uSylvie wakhankanya ukuba wayenobudlelwane kunye 'neposi.' Ukuba oku kuyinyani (ucinga ukuba uyinto eyahlukileyo kaLoki), oku kunokuba sisalathiso kuDavid, uPostman, ovela kwiihlaya ze'Morlocks '.
UMobius M. Mobius - 'Elinye iarhente':
UMgwebi uRavonna kunye noMobius kwisiqendu 2. Umfanekiso nge: Disney + / Marvel
Kwinqaku lesi-2 likaLoki, uJaji Ravonna wakhankanya uMmeli Mobius esithi, 'Asinguwe wedwa umhlalutyi osebenzela mna.'
Isiqendu sesi-3 simisele ukuba bonke abasebenzi be-TVA bazinto ezohlukeneyo, abanokuthi bacinywe iinkumbulo. Ngoku, oku kunika enye ithiyori ethembekileyo ethi 'enye iarhente' uRavonna akhankanye kuyo Isiqendu 2 inokubakho ngokwahluka kukaMobius.
Kwiimidlalo ezihlekisayo, uMobius ukwabona iinguqulelo ezininzi zakhe esebenza kwiTVA. Ngapha koko, igama elipheleleyo le-Arhente kaMobius uMobius M (Mobius) uMobius, unokucacisa ngeendlela ezimbini okanye ezintathu ezahlukeneyo zikaMobius xa zizonke.
Ngaba ulenzile ixesha noLoki? Thatha isiqendu sesibini seMarvel Studios ' #Loki , ngoku uqhubeka @NtsikeleloTyala kwaye uzilungiselele isiqendu esitsha ngoLwesithathu! pic.twitter.com/IZ8722oXFc
-Loki (@LokiOfficial) Nge-20 kaJuni 2021
I-Loki Isiqendu sesi-3 sisishiye ngethiyori ezininzi ngeziqendu ezizayo kunye nefuthe lothotho kwi-MCU Phase 4. Ngelixa ukunqongophala kuka-Owen Wilson's Mobius kushiye abalandeli belahlekile ngumlingiswa ohlekisayo kunye nomtsalane, yayilungelelaniswe yikhemistry egcwele ulonwabo phakathi UToki Hiddleston's Loki kunye USophia Di Martino NguSylvie.
Emva kwesiqendu sesi-3 sokutyhilwa okukhulu, abalandeli ngoku bangalinda amagqabantshintshi ngesiQendu 4 kwizithembiso ezizayo kule veki izayo.
Uluhlu lwezinto ezizenzekelayo ezenziwayo
kutheni abanye abantu benolunya kangaka
Ukofi kingston uphumelele ubuntshatsheli be-wwe
uphi umnumzana. irhamncwa phila